Amai Mtetwa Vanoburitswa Mutirongo Mushure Mekubvisa Mari yeChibatiso
Kurume 25, 2013
Amai Beatrice Mtetwa
HARARE — Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Amai Beatrice Mtetwa, vaburitswa mutirongo neMuvhuro mushure mekunge dare repamusro ravabvumidza kubhadhara mazana mashanu emadhora semari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo.
Mutongi wedare dare repamusoro, VaJoseph Musaka, vati vaona zvakakodzera kuti Amai Mtetwa vapihwe mukana wekubvisa mari yechibatiso zvichitevera chikumbiro chavo mushure mekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare ramajisitireti svondo rapera.
Rimwe remagweta aAmai Mtetwa, VaHarrison Nkomo, vati vafara chose nemutongo wapihwa nedare iri. Vatiwo nyaya iyi yange isingatombofaniri kusvika kudare iri.
Amai Mtetwa vakasungwa musi wa17 Kurume apo vaiedza kubatsira vashandi vemumahofisi emutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, avo vari kupomerwa mhosva yekuferefeta nyaya dzehuwori dziri kuitwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende.
Mumwe wenhengo dzeMDC vari kupomerwa mhosva yekuuraya mupurisa mumusha weGlen View, uye vachimirirwa naAmai Mtetwa panyaya yavo, Muzvare Memory Ncube, vanoti vafara chose kuti gweta ravo raburitswa mutirongo.
Gurukota rezvemari, VaTendai Biti, gurukota rezvebumbiro remutemo nemabasa eparamende, VaEric Matinenga, pamwe nemagweta akawanda, vange vari mudare papihwa mutongo uyu.
Zvichakadai, mapurisa arambidza magweta kuratidzira muguta achitsutsumwa kusungwa nekushungurudzwa kwaAmai Mtetwa apo vaiita basa ravo.
Mutungamiri wesangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe, VaLlyod Mhishi, vati magweta haasi kufarawo nenyaya yekuti mutongo wedare repamusoro wekuti Amai Mtetwa vaburitswe muhusungwa wakapihwa nemutongi, VaCharles Hungwe, svondo rapfuura, hauna kutevedzwa.
Vati kunyange hazvo varambidzwa kuratidzira, VaMhishi vati vakwanisa kuendesa gwaro rine zvichemo zvavo kumukuru wemapurisa, VaAugustine Chihuri, muchuchusi wehurumende, VaJohannes Tomana, mahofisi egurukota rezvemitemo, VaPatrick Chinamasa, pamwe nemahofisi emukuru wevatongi eJudicial Service Commission. VaMhishi vati vachaendesawo gwaro iri kumahofisi emakurukota anoona nezvemukati menyika.
VaMhishi vati havasi kuti magweta haasungwe kana achinge apara mhosva, asi kuti haafaniri kusungwa apo anenge atumwa kunoita basa nevanhu. Vati kana magweta akasungwa nekushungurudzwa achiita basa rawo, hapana anozokwanisa kumirira veruzhinji.
Amai Mtetwa vachadzokera zvakare kudare ramajisitireti musi wa 3 Kubvumbi apo pachanzikwa nyaya yavo zvekare.
Mune imwewo nyaya, sangano remubatanidzwa wenyika dzemuEurope, reEuropean Union, EU, rambomisa kushandisa zvirango zvekufamba nezvehupfumi kuvanhu makumi masere nemumwe chete, pamwe nemakambani masere.
Vasara vari pazvirango izvi mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, mudzimai wavo, Amai Grace Mugabe, mukuru weZimbabwe Defence Forces, VaConstantine Chiwenga, mukuru wemauto epasi, VaValerio Sibanda, mukuru wemauto emuchadenga, VaPerence Shiri, mukuru wevasori, VaHappinton Bonyongwe, mukuru wechimwe chikwata chevakarwira hondo rusununguko, VaJabulani Sibanda, pamwe negurukota remuhosi maVaMugabe, VaDidymus Mutasa. Makambani achiri pazvirango iZimbabwe Defence Industries neZimbabwe Mining Development Corporation.
Vakasanobata chinzvimbo chemumiriri weEU muZimbabwe, VaCarl Skau, vati vasara vari pazvirango izvi vanhu vanotora matanho ekuti munyika muve nekugadzikana pamwe nehutongi wejekerere.
VaSkau varatidzao kushushikana nekusungwa kuri kuitwa vanhu munyika mumasvondo mashoma apfuura.
Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute, VaPedzisayi Ruhanya, vati havashamiswi nekusiyiwa kwaVaMugabe nevakuru vemauto vari pazvirango nekuti ndivo vanokonzeresa mhirizhonga munyika.
Vatiwo makambani asiiwa ari pazvirango ndiwo anoona nekutengeswa kwemangoda asi mari yacho isangaendeswe kuhurumende pamwe nekugadzirwa kwezvombo izvo zvinoshandiswa mukushungurudza veruzhinji.
VaMugabe nevamwe vavo vakatemerwa zvirango muma 2002 vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu pamwe nekuita sarudzo dzisina kujeka.